Labada olol ee mataanaha ah ma noqon karaan isku jinsi? - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Olol Mataano & Jacayl Rabaani ah / Labada olol ee mataanaha ah ma noqon karaan isku jinsi?
Haa, dabka twin waxay noqon kartaa isku jinsi Halka mataanaha qaar ay yihiin iska hor imaadka, tani had iyo jeer maahan kiiska kuwa kale. Wali waa hal naf oo kala tagta laakiin kala jabka ayaa ku dhici kara siyaabo badan oo kala duwan. Qaarkood waxay yeelan karaan waxyaabo badan oo wadaaga ama xitaa isku eg. Qaarkood waa jaceyl halka kuwa kalena ay yihiin platoonik. Qaarkood waa isku da 'halka kuwa kalena ay ka soo jeedaan jiilal kala duwan.
In kasta oo ololka mataanaha ahi ku yimaadaan noocyo kala duwan, sida nolosha oo kale, had iyo jeer waxaa jira sabab macquul ah oo dhinac kasta leh.
Waan kala tagnay
min hal ilaa labo
Marka waan dareemi karnaa
jacayl run ah
Gobol isku dheeli tiran
aniga iyo adiga daahir
Tagsmiyirka jinsiga koritaanka shakhsi ahaaneed gabayo ruux ahaaneed Labaatan Guul
xiddiga wuxuu leeyahay,
Qoraal kale oo macluumaad iyo si wanaagsan loo qoray !!! Waxaan gabi ahaanba la dhacaa midkan! Qor Cajiib ah had iyo jeer, sii iftiima 🖤🤗✨
Waad ku mahadsan tahay dhammaan taageeradaada Ace! Aad baan ugu faraxsanahay inaan maqlo adiga ayaa kugu soo dhacay. ❤️
Waa maxay ololka mataanaha?
Sidee astaamaha badanaa loo bixiyaa?